Dargaggeessi Oromoo tokko Hargeeysa keessatti du’aan addunyaarraa gale – Welcome to bilisummaa
Dargaggeessi Oromoo tokko Hargeeysa keessatti du’aan addunyaarraa gale
bilisummaa December 19, 2016	1 Comment
Namin kun dargaggoo Khaalif Umar jedhama Godina
Harargee Lixa Aanna Daroo Labuutii dhalatee. Guyyaa 17-12-2016
Somali laand magaala Hargeeysatii lubbun isaa adunyaa tana
irra du’aan booqotee! !!
Miidhaa mootummaan TPLF irran geysee
irra dandamachuu hin dandenyee;guyyaa murasa
dura kan somale land senee yomuu tahu ega guyyaa 2f
mana yaala turee boda boqotee.MATTIF ALIII
ISA MARAF IMAANAF SABARI ISINIF HAWAA…..
Previous Mootummaan Wayyaanee Dhimma Maaster Pilaanii Magaalaa Finfinneekan Duraan Dhiise jedhe Amma Maaliif Afarsaa Jira?
Next “Obboo Galaasa Dilboo maal ta’an, maal barbaadu?
Rabbi Rahamata hagoodhuuf Bilisuma adungarati dhabe akhirati janataan haa qananeesu!!! Ya ilmaan Oromo duuti eega duaa taate falmatuu!!! Tanaaf wanii alaa abdatan hi jirtuu akka walbetaniif Wal amantaan if jaara. ABOn essini Alabaans tesaan! caasaa aanaa-godiina- gutuu Oromia iff jaara! Naanoon martii oromiaa akka sirnaa gadaa Raba dooriin waraana jaramtee gabroomsa tigree bakatakaa kaanii firaa darbaa